Kungani Amaqembu Wokuthengisa Nokumaketha Adinga I-Cloud ERP | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 6, 2020 NgoMsombuluko, Okthoba 5, 2020 Ajoy Krishnamoorthy
Abaholi bezokukhangisa nokuthengisa bayizinto ezibalulekile ekushayeleni imali engenayo yenkampani. Umnyango wezokumaketha ubamba iqhaza elibalulekile ekuqhakambiseni ibhizinisi, ukunikela ngemininingwane yalo, nokusungula abahlukanisi balo. Ukumaketha futhi kudala intshisekelo kumkhiqizo futhi kudala ukuhola noma amathemba. Ekhonsathini, amaqembu okuthengisa agxila ekuguquleni amathemba kumakhasimende akhokhelayo. Imisebenzi ihlangene futhi ibaluleke kakhulu empumelelweni yebhizinisi jikelele.
Njengoba kunikezwe umthelela ukuthengisa nokumaketha on the line, kubalulekile ukuthi abathatha izinqumo bandise isikhathi nethalente abanalo, futhi ukwenza njalo kufanele babe nokuqonda ukuthi amaqembu enza kanjani kuwo wonke umugqa womkhiqizo. Intuthuko kwezobuchwepheshe yenze kwaba lula ukuthola ukufinyelela ngesikhathi sangempela kulwazi olumayelana nabasebenzi bebhizinisi namakhasimende. Ngokuqondile, ubuchwepheshe be-ERP obusekelwe emafini buhlinzeka ngalezi zinzuzo.
Kuyini i-Cloud ERP?
I-Cloud ERP iyi-Software as a Service (SaaS) evumela abasebenzisi ukuthi bafinyelele isoftware ye-Enterprise Resource Planning (ERP) nge-inthanethi. I-Cloud ERP ngokuvamile inezindleko eziphansi kakhulu ngaphambili ngoba izinsizakusebenza zekhompyutha ziqashiswa ngenyanga kunokuthengwa ngqo futhi zigcinwe endaweni. I-Cloud ERP iphinde inikeze izinkampani ukufinyelela kuzinhlelo zazo ezibucayi zebhizinisi nganoma yisiphi isikhathi kusuka kunoma iyiphi indawo kunoma iyiphi idivayisi.
Ngabe i-Cloud ERP iguquka kanjani?
Intshisekelo nokwamukelwa kwezixazululo zokuphathwa kwebhizinisi lefu kanye neselula bekulokhu growing eminyakeni yakamuva. Ukuthuthuka okwandayo kwezobuchwepheshe kukhulise isidingo samadivayisi axhunyiwe nedatha yesikhathi sangempela ukusiza ukwazisa ngezinqumo zebhizinisi ezibalulekile. Ukusetshenziswa kwamadivayisi ahlakaniphile njengamafoni, amathebulethi, nezinye izimpahla zedijithali kushintshe indawo yokusebenza.
Kusukela ubhubhane lwe-COVID-19, ukufunwa kwezixazululo zefu nezamaselula sekune- yaqhuma. Isidingo sokuqhuba ibhizinisi kusuka noma yikuphi futhi nganoma yisiphi isikhathi sikhulise isidingo sokuxhunywa kwamafu. Lesi sidingo siholele ekwamukelweni okusheshayo kwezinhlelo zokuphathwa kwebhizinisi elihambayo ezihlomisa abasebenzi ngamandla okusebenza ngaphandle kwehhovisi futhi bahlale bevuselelwa kwimininingwane yenkampani ngesikhathi sangempela. UGartner ubikezela lokho emhlabeni wonke Imali yefu izokhula ngamaphesenti angama-6.3 ngo-2020. Ngaphezu kwalokho, isoftware njengensizakalo (i-SaaS) ihlala isengxenyeni enkulu yezimakethe futhi kulindeleke ukuthi ikhule ifike ku- $ 104.7 billion ngo-2020.
I-Acumatica siqaphele isidingo sezisombululo zefu nezamaselula selokhu kwasungulwa ngo-2008, futhi siqhubeka sithuthukisa izixazululo zaso ukuze sisebenzele kangcono izidingo eziguqukayo zamabhizinisi akhula phakathi kwemakethe. NjengoSepthemba odlule nje, ngokwesibonelo, i-Acumatica imemezele ukukhishwa kwe- I-Acumatica 2020 R2, okwesibili kokubuyekezwa komkhiqizo wayo kabili ngonyaka.
Ukukhishwa komkhiqizo okusha kuqukethe inombolo ebalulekile yezibuyekezo, kufaka phakathi:
Ukuhlanganiswa nesicelo sokuhola se-eCommerce Shopify
Ukwenziwa kwamadokhumenti akhokhelwa ngama-Akhawunti anikwe amandla we-AI / ML, okwenza kube lula ukuthi abasebenzisi bayilungisa kanjani idatha engabonwa kumadeshibhodi, ihlaziywe kumatafula e-pivot, futhi isetshenziselwe izaziso zesikhathi sangempela.
Umdabu ngokugcwele Isixazululo se-POS software enikeza abathengisi ukutholakala kwempahla yesikhathi sangempela, izindawo eziningi, nokuphathwa kwempahla yokugcina izimpahla emuva okuskena ngebhakhodi. Manje, abasebenzisi bangaphatha isipiliyoni esiphelele se-omni-channel ngaphandle kokuba nabasebenzi abasebenza kusayithi.
Inikwe amandla i-AI / ML ukuphathwa kwezindleko okuthuthukile, efaka izifunzo zebhange ze-elektroniki zamakhadi ezinkampani futhi yenze ukwenziwa kwamarisidi ukuhlehlisa izinqubo zabasebenzisi abajwayelekile beselula kanye nabasebenzi abasebenza emuva kwe-accounting.
Ukuphathwa kwezindleko kubaluleke kakhulu okwamanje eminyangweni yezezimali ezinkampani. Ubhadane lwe-COVID-19 seluholele izinkampani ukubeka ukugcizelelwa okusha ekuphathweni kwezindleko, kugxilwe ekutholeni izindawo zokonga izindleko. Imicimbi engakaze ibonwe kulo nyaka iqinise isidingo samabhizinisi sokutshala imali ekubonakaleni okungcono, ekulawulweni kwezindleko okungcono nasekuzisebenziseni. Abaholi bebhizinisi badinga izinsiza, manje kunanini ngaphambili, ukwenza izinqumo zebhizinisi ezinolwazi. Amandla amasha we-Acumatica wokufunda ngomshini azoba nobuchule ngokuhamba kwesikhathi, afunde kusuka ekulungisweni okwenziwe ngesandla kwedatha engenisiwe ukuze ekugcineni kulungiswe izinqubo ezejwayelekile zezezimali futhi konge imali yamabhizinisi.
Kungakusiza Kanjani Ukuthengisa Nokumaketha Kwefu ERP?
I-Cloud ERP inganikeza amaqembu okuthengisa ngombono ophelele wamathuba, oxhumana nabo, nayo yonke imisebenzi ethonya isinqumo sokuthengisa. Ngaphezu kwalokho, ukunikezwa okuholayo nokugeleza komsebenzi kungasiza ukuphatha izinqubo zokuthengisa ukwenza ngcono ukusebenza kahle. Amathuluzi e-ERP athuthukisa ukugeleza kolwazi, anciphisa imijikelezo yokuthengisa, futhi akhuphule amanani asondele.
Emaqenjini wokumaketha, i-ERP yamafu ingaxhasa isisombululo sokumaketha esihlanganisiwe, esixhunywe ngokuqinile nezimali nokuphathwa kokuqukethwe. Ukuba nesixazululo sokumaketha esihlanganisiwe kungathuthukisa ukusebenzisana phakathi kokuthengisa, ukumaketha, kanye nokwesekwa ngenkathi kuqinisekiswa ne-ROI ephezulu yedola ngalinye lokukhangisa elisetshenzisiwe. Kuhlanganiswe nohlelo lwe-ERP, amaqembu wokukhangisa nawo angasebenzisa izinhlelo ze-Customer Relationship Management (CRM) ukuphatha ukuhola, ukuthuthukisa ukuguqulwa, ukukala ukusebenza komkhankaso, ukuxhumana nabantu oxhumana nabo, nokwenza ngcono umkhiqizo. Bangabamba futhi imikhondo kusuka kumafomu ewebhu, izinhlu ezithengiwe, izikhangiso, i-imeyili eqondile, imicimbi, neminye imithombo
Ngenxa yokwakheka kwabo okususelwa kuwebhu, iminikelo eminingi yamafu ye-ERP iza nama-API wokuhlanganiswa okusheshayo kwamanye amathuluzi nezinhlelo ezibucayi zemishini. Izinzuzo zamaqembu wokuthengisa nokumaketha ziningi, kufaka phakathi ukusetshenziswa okusheshayo nokushibhile kanye nesikhathi esisheshayo sokumaketha amasu weselula. Ngokusebenzisa isisombululo sefu ERP, amaqembu okuthengisa nawokumaketha angathola ukulawula okukhulu phezu kwezinqubo zawo kanye nokuqonda okungcono ekusebenzeni kwawo ngesikhathi sangempela. Bangakwazi ukugcina umkhiqizo uphakeme ngokunikeza abasebenzi ukufinyelela kwe-inthanethi kulwazi olusesikhathini kusuka noma yikuphi besebenzisa noma iyiphi idivayisi nganoma yisiphi isikhathi.
Tags: acumaticaApiizindleko zokongaERPukuphathwa kwezindlekomarketingukumaketha i-erpisoftware posyokuthengisathenga
U-Ajoy unolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-15 kulo mkhakha endimeni yezobuchwepheshe, ukumaketha kanye nobuholi. Ngaphambi kwe-Acumatica, u-Ajoy wayeseMicrosoft eqhuba impumelelo yebhizinisi ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuphathwa kwemikhiqizo nezindima zokukhangisa muva nje esebenza njengoMqondisi we-OEM Segment Marketing lapho yena nethimba lakhe babephethe isu lokuya emakethe kubo bonke ababukeli bezentengiselwano nabathengi. .
Vuselela Umphakathi: Phindisela Okuqukethwe Kwakho Okudala Emithonjeni Yezokuxhumana